भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार: ६ महिनामा ३ सय ५२ जनाविरूद्ध मुद्दा - समसामायिक | Kantipur TV HD
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार: ६ महिनामा ३ सय ५२ जनाविरूद्ध मुद्दा
सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज स्थापनाको २८ औं वर्षगाँठ मनाएको छ । अख्तियारले नयाँ नेतृत्व पाएपछि भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा हात हाल्ने क्रम त बढाएको छ । तर शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति कमाउने बहालवाला राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिविरुद्ध भने अख्तियार अझै प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार प्रकरणको चर्चा धेरै भयो । तर अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउन भने दुइ दशक कुर्नुपर्यो । गत पुस ५ गते मात्र ९१ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित पूर्वगभर्नर तिलक रावललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका ठेकेदार सांसद हरिनारायण रौनियार, ठेकेदार पृष्ठभूमिकै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे लगायतविरुद्ध पनि यही वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कासँग १८ करोड ६६ लाख रूपैयाँबराबर गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्तियारले यसैपालि मुद्दा चलायो । समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडा प्रकरणमा २९ करोड हानी पुर्याएको अभियोगमा दुइ पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङ पनि भ्रष्टाचार मुद्दा धाइरहेका छन् ।
लोकमानसिंह कार्कीको पदावधि विवादग्रस्त रह्यो । दीप बस्न्यात नेतृत्वको अख्तियारले खासै सक्रियता देखाउन सकेन । नवीन घिमिरेले नेतृत्व सम्हालेपछि अख्तियारको गति केही फरक भएको छ । गत साउनयता मात्र अख्तियारले २ सय ९४ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी ३ सय ५२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
तर अस्वाभाविक जीवनस्तर अपनाइरहेका कतिपय प्रभावशाली राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकको सम्पत्तिको वैधता जाँच गरी कानुनी डन्डा प्रयोग गर्न अझै हिच्किचाएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकै छ ।
अख्तियारले नै गरेको अध्ययनले राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट रहेको देखाएको छ । भ्रष्टाचारका जरा उच्च तहमा हुने मानिन्छ । त्यसैले अख्तियारले कारबाही पनि शक्तिको दुरूपयोग गरी अकुत आर्जन गर्ने उच्च तहबाटै सुरू गर्नुपर्छ ।
दूषित पानी बेच्ने तीन दर्जन उद्योग कारवाहीमा
प्रवासी नेपाली : नयाँ पुस्ताले अपनाउलान् त नेपाली भाषा संस्कृति ?
जलवायु परिवर्तनले हिमाली जिल्लाको कृषिमा सकारात्मक असर !
जनप्रतिनिधि नै अवैध बालुवा उत्खननमा